Toamasina I : nitotongana ho 39,39% ny taham-pahafahana BEPC | NewsMada
Toamasina I : nitotongana ho 39,39% ny taham-pahafahana BEPC
Par Taratra sur 01/08/2016
Nivoaka ny zoma tolakandro teo taorian’ny adihevitra teo amin’ireo mpampianatra nitsara ny fanadinana sy ny tompon’andraikitry ny fampianarana teto Toamasina I ny valin’ny fanadinana BEPC 2016. Tamin’ireo mpiadina 4.704 niatrika ny fanadinana, tsy nisy afa-tsy
1.853 ireo afaka. Nitotongana hatramin’ny 39,39 % ny taham-pahafahana, raha 43 % izany tamin’ny taon-dasa .
Raha ny naoty azon’ny mpianatra voalohany, niakatra izany tamin’ity taona ity, nahatratra 18,14/ 20 raha 17,80/20 izany ny taona 2015. Nahazo ny salanisa ambony indrindra ny mpianatra avy amin’ny sekolim-panjakana CEG de réference izay sekoly andraisana ireo mpianatra sangany aorian’ny fanadinana CEPE. 100 % rahateo ny taham-pahafahana mpiadina rehetra ho an’ity CEG ity. Izy irery ihany koa no nahatratra izany ao Toamasina I.
Nanambara ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana Toamasina I fa ny taranja siantifika toy ny matematika sy fizika no tena naharatsy ny taham-pahafahan’ny mpiadina tamin’ity BEPC 2016 ity. Ratsy ny naotin’ireo mpianatra tamin’io taranja io ary betsaka ny tsy nahavita ny laza adina hatramin’ny farany. Raha ny angom-baovao tamin’ireo mpanabe niatrika ny ady hevitra ny zoma maraina, nidina hatramin’ny salanisa 09/20 izy ireo nahazoana izao taham-pahafahana 39,39 % tamin’ity taona ity.
Ankoatra izany, ho an’ny distrika roa teo anivon’ny Dren Atsinanana, ho an’i Brickaville, nidina ho 12% ny taham-pahafahan’ny mpiadina, raha 42 % kosa izany ho an’Antanambao Manampotsy.